यसकारण पैदल हिड्ने गर्नुहोस्
यसकारण पैदल हिड्ने गर्नुहोस्
आजभोलि प्रायः मानिसहरु पैदल हिड्न रुचाउँदैनन् । अहिले सबैको घरघरमा मोटरसाइकल, स्कुटर हुने हुन्दा मानिसहरु बजारसम्म पनि हिडेर पुग्न सक्दैनन् । आधा घण्टा, एक घण्टा वा त्यो भन्दा बढी समय लाग्ने यात्राका लागि तपाईं गाडी चढ्नुहुन्छ । त्यती मात्र होइन, थोरै दुरी छिचोल्न परेमा पनि तपाईंलाई हिँड्ने जाँगर चल्दैन ।
यात्रामा हिँड्ने कुरै भएन । कार्यलयमा पुगेपछि हिँड्ने कहाँ ? कामको चक्करमा एउटै कुर्सीमा बसेर घण्टौं बिताइदिनुहुन्छ । साथीभाईसँग गफिन पाएमा पनि तपाईं घण्टौ एकै आसनमा बस्नुहुन्छ । घरमा त हिँडडुल गर्ने फुर्सद नै छैन ।
वास्तवमा पैदल हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक छ । यद्यपि हामी पैदल हिँड्न अल्छी मान्छौं । पैदल हिँड्दा समय बर्वाद भएको ठान्छौं । शहरमा धूलो, धुँवाले गर्दा पनि पैदल हिँड्न केही कठिाइनाई छ । जबकी पैदल हिँड्ने हो भने न समयको बर्वाद हुन्छ, न स्वास्थ्यमा क्षति नै ।
पैदल हिँड्दा शरीरको समुचित व्यायाम हुन्छ । जब तपाईं फटाफट हिँड्न थाल्नुहुन्छ, तपाईंका हात, खुट्टा लगायत सबै अंग सक्रिय हुन्छ । कुनैपनि अंगलाई भार पर्दैन । समुचित ढंगले सबैको व्यायाम हुन्छ । त्यसैले दिनमा केही न केही वाहाना गरेर भएपनि हिँड्ने गरौं । छोटो दुरीमा कार्यलय छ भने पैदल हिँड्दै पुग्नु उत्तम हो । यसले गर्दा अतिरिक्त व्यायाम गर्ने समय खर्च हुँदैन ।
पैदल हिँड्दा मांशपेशीदेखि मस्तिष्कसम्मलाई फाइदा पुग्छ । जब तपाईं फटाफट हिँड्ने गर्नुहुन्छ, मांशपेशी, हड्डी, जोर्नी लगायतको स्वत व्यायाम हुन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्तो समस्या भएकाहरुले त हिँड्नु अरु फाइदाजनक छ ।
पैदल हिँड्ने मान्छेको मुटु स्वस्थ्य हुन्छ । पैदल हिँड्दा मुटुलाई निकै फाइदा पुग्छ । चिकित्सकका अनुसार कोलेस्टोरलाई सन्तुलित राख्नका लागि सही खानपानसँगै दैनिक तीस मिनेट हिँड्नु अनिवार्य छ ।
नियमित हिँडडुल गर्दा हड्डी तथा जोर्नीलाई पनि फाइदा पुग्छ ।
मधुमेहमा लाभ, मस्तिष्कलाई फाइदा
नियमित रुपमा दैनिक आधा घण्टा हिँड्नुपर्छ, मस्तिष्क पक्षघातको खतरा करिब ३० प्रतिशत कम हुन्छ । भनिन्छ, नियमित पैदल हिँड्दा मस्तिक पनि स्वस्थ्य हुन्छ । बिहान खाली खुट्टा हरियो चौरमा हिँड्दा आँखाको दृष्टि बढ्छ ।
मुड खराब भएमा
कहिले काहीँ एकोहोरो काम गरिरहँदा हाम्रो मुड खराब हुन्छ । हामीलाई दिक्क लाग्छ, झर्को लाग्छ । मुड एकनास रहँदैन । स्थिर र शान्त रहँदैन । यदि त्यसो हो भने तीस मिनेट जति पैदल हिँड्नुपर्छ, यस्तो समस्याबाट मुक्ती पाइन्छ ।
अहिले धेरैजसो मोटोपनको शिकार भएका छन् । उनीहरुलाई मोटोपन कसरी घटाउने भन्ने चिन्ता छ । यदि नियमित रुपले पैदल हिँड्ने हो भने धेरै हदसम्म मोटोपनि पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
बजारबाट आएपछि घर पस्नुअघि के गर्ने के नगर्ने ? (भिडियो)
अब कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट एक घण्टामै
कोरोनाभाइरस : युवाहरूलाई जोखिम के हो ?